अपार्टमेन्ट सूची। नि: शुल्कको लागि विज्ञापन गर्नुहोस् - realtyWW
सेप्टेम्बर 12, 2016 by realtyWW, कुल अवलोकन:
realtyWW एक अन्तर्राष्ट्रिय घर जग्गा विज्ञापन वेबसाइट हो। हाम्रो वेबसाइट मा अपार्टमेन्ट संग विज्ञापन गर्न कृपया यो पृष्ठ अनुसरण गर्नुहोस् एकपटक अपार्टमेन्ट मालिकले यसलाई बिक्रीको लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि र आवास क्रममा ल्याएपछि ग्राहकहरूको खोजी सुरु गर्ने समय आइसकेको छ। यो कुनै ठूलो कुरा होइन, एक अपार्टमेन्ट बेच्न इच्छुक व्यक्तिको संख्या यो किन्न इच्छुकहरूको संख्या भन्दा बढी छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद।
अपार्टमेन्ट सूची कसरी बनाउने?
अपार्टमेन्ट सूचि प्रयोग गरेर कसरी विज्ञापन गर्ने? अपार्टमेन्ट लिस्टि ofको विशाल बहुमत आज इन्टरनेट साइटमा दिइन्छ। त्यसकारण, सबै जानकारीहरू इलेक्ट्रोनिक ढाँचामा उपलब्ध छन्। केही व्यक्तिहरूले अपार्टमेन्ट अवस्थित भएको ठाउँमा अपार्टमेन्ट सूचि राख्ने पुरानो सिद्ध विधि प्रयोग गर्दछन्। यस विधिको महत्वपूर्ण नुकसान यो हो कि कागज एक दिन भन्दा बढि ह्या hang्ग हुँदैन, त्यसैले हामी सम्भावित खरीददारहरूबाट निरन्तर रुचिको अपेक्षा गर्न सक्दैनौं।
घर जग्गा एजेन्सीहरूले जमिन्दारलाई झन्झटबाट पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ। एजेन्ट आफैंले खरीददारसँग कुराकानी गर्दछ, कोठा देखाउनेछ, आवश्यक कागजातहरू जाँच गर्दछ। तर यी सेवाहरूको लागि उचित भुक्तानीको लागि भुक्तान गर्न आवश्यक छ।
यो विकल्प नयाँ नवीकरणको साथ राम्रो अपार्टमेन्टको मालिकको लागि उपयुक्त छ, जुन बजार औसतभन्दा माथि तिर्ने आशा गर्दछ।
अपार्टमेन्ट सूचीको लागि त्यहाँ कुनै विशेष फारमहरू छैनन्, तर मालिकहरूले केहि बान्कीलाई अनुसरण गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, आवश्यक न्यूनतम जानकारी दर्साउँदै।
को एक उदाहरण हेर्नुहोस् अपार्टमेन्ट लिस्टिंग यहाँ
कसरी मालिक द्वारा बिक्री को लागी अपार्टमेंट लिस्टिंग लेख्न? तपाईंले "अपार्टमेन्ट बिक्रीको लागि" भन्ने शब्दहरू र रियल इस्टेट विशेषताहरूको ब्यबहारबाट शुरू गर्नुपर्दछ: कोठाको संख्या, अपार्टमेन्टको आकार, छुट्टै शौचालय छ कि छैन, एउटा बालकनी उपलब्ध छ भने।
ठेगाना र नजिकको उपयोगी वस्तुहरूको एक संक्षिप्त विवरण निर्दिष्ट गर्नुहोस्: ठूला पसल, पार्क, सबवे स्टेशनहरू र यस्तै। नियमको रूपमा, मालिकहरू ती वस्तुहरूको बारेमा मौन रहन्छन्, जसले अपार्टमेन्टको लागत कम गर्न सक्दछ: घर नजिक उद्यमहरू, रेलवे ट्र्याकहरू।
तपाईंको अपार्टमेन्टका फाइदाहरूको विस्तृत वर्णन गर्नुहोस्: मर्मतको गुणस्तर, केही फर्नीचर, घरका उपकरणहरूको एक मानक सेट (वाशिंग मेशीन, माइक्रोवेभ, टिभी र यस्तै अन्य), वाइफाइ उपलब्ध छ कि छैन। तपाईं बिक्री को लागी अधिक रचनात्मक अपार्टमेंट सूचि बनाउन सक्नुहुन्छ।
अपार्टमेन्ट सूचि उद्देश्यपरित हुनुपर्दछ। आवासलाई केही गैर अवस्थित गुणहरू विशेषता नदिनुहोस्। भविष्यको मालिक कोठाबाट अर्को कोठामा आफै जान्छ, फर्निचर र सेनेटरी वेयर हेर्दै। अपार्टमेन्ट सूचीमा धोका दिई एक संभावित खरीदार मूल्य तल सम्झौता गर्न थाल्छ वा मात्र टाढा जान्छ कि मात्र नेतृत्व गर्दछ।
आवश्यक सम्पर्कहरू र इच्छित संचार विधि निर्दिष्ट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। खरिदकर्ता र घर जग्गा एजेन्सीहरूका प्रतिनिधिहरू प्रायः कल हुन्छन्, कहिलेकाँही राती पनि। र कलहरू अपार्टमेन्ट सूची पछि रियल ईस्टेट साइटहरू हटाइए पछि पनि जारी रहनेछ।
रियल एस्टेट एजेन्टलाई माथिको नम्बरमा कल नगर्न कुनै मतलब छैन। एजेन्टहरूले अझै पनि सम्पत्तीको मालिकसँग कुराकानी गर्नेछन् र उनीहरूका सेवाहरू प्रस्ताव गर्नेछन्, जब कि उचित ग्राहक पहिले नै फेला परेको छ भन्ने आश्वासन दिन्छ।
तपाईंको अपार्टमेन्टको केहि तस्वीरहरू लिने प्रयास गर्नुहोस्: कोठा, भान्छा, बाथरूम, हलवे। क्यामेराको प्रकार्य अब एक मोबाइल फोन प्रदर्शन गर्न सक्छ। त्यसकारण, लगभग सबै अपार्टमेन्ट सूची ईन्टरनेटमा सम्पत्ती को तस्वीर संग प्रदर्शित छन्। ग्राफिकल जानकारी को अभाव क्रेता लाई यस प्रकाशन लाई अन्तिमको रुपमा विचार गर्न सचेत गर्दछ।
नि: शुल्क बिक्रीको लागि अपार्टमेन्ट सूची पोष्ट गर्न उत्तम ठाउँ कहाँ छ? आज, बिक्रीको लागि अपार्टमेन्ट सूचि प्रायः इन्टरनेटमा राखिन्छ। तपाईंले कहिँ पनि जान आवश्यक पर्दैन, एक सम्झौता निष्कर्षमा पुर्‍याउन वा शुल्क तिर्न। अपार्टमेन्ट सूचि बनाउँदा M मिनेट भन्दा कम लाग्नेछ। थपको रूपमा, तपाइँ एक भन्दा बढि वेबसाइटमा तपाइँको अपार्टमेन्ट सूची राख्न सक्नुहुन्छ।
अपार्टमेन्टको मालिकलाई तथ्यको लागि तयार हुनुपर्दछ कि बेइमान रियाल्टरहरू उनीहरूको एजेन्सीको तर्फबाट अपार्टमेन्ट "लिन्छन्", विज्ञापनबाट डाटा र फोटोहरू प्रयोग गरेर। यस केसमा, त्यस्ता प्रकाशनको बारेमा साईट गुनासो गर्नुहोस्।
कुन वेबसाइटहरूमा शुल्कको साथ अपार्टमेन्ट सूची पोष्ट गर्न सम्भव छ? भुक्तान गरिएको अपार्टमेन्ट सूची मात्र सेवा दिइन्छ यदि मालिक आफ्नो सन्देश हाईलाइट गर्न वा खोजी परिणामहरूमा यसलाई पहिलो स्थानमा बढाउन चाहान्छ। तथाकथित "प्रीमियम विज्ञापन" यस उद्देश्यको लागि बनाइएको छ।
यो विकल्प ती विक्रेताको लागि उपयुक्त छ जो चाँडै आफ्नो सम्पत्तीको खरीददार खोज्न चाहान्छन्।
समाचार पत्र सूची बिस्तार बिस्तारै पछि हटाइन्छ।
अपार्टमेन्ट को बारे मा डाटा को प्रकाशन पछि, मालिक धैर्य हुनु पर्छ। उनले रियल्टर्सबाट धेरै कलहरू प्राप्त गर्नेछन्, भविष्यका भाँडादारहरूको मूल्य र अपर्याप्त आवश्यकताको सम्बन्धमा लामो ट्रेडहरू। सम्पत्तीको बिक्री मात्र आय हो, तर काम पनि होइन।
अपार्टमेन्ट सूची वितरण
हाम्रो वेबसाइटमा नि: शुल्क अपार्टमेन्ट सूचीको साथ विज्ञापन गर्न कृपया यो पृष्ठ अनुसरण गर्नुहोस्। अपार्टमेन्ट सूचि वस्तुगत हुनुपर्दछ, होईन
3.5 (70%)4वोट
realtyWW सेप्टेम्बर 12, 2016
यो प्रविष्टि मा पोस्ट घर जग्गा विज्ञापन र ट्याग अपार्टमेन्ट विज्ञापन गर्नुहोस्, नि: शुल्क अपार्टमेन्ट विज्ञापन गर्नुहोस्, विज्ञापन अपार्टमेन्टहरू, अपार्टमेन्टहरूको लागि विज्ञापन, अपार्टमेन्ट सूची, अपार्टमेन्ट विज्ञापन, अपार्टमेन्ट विज्ञापन, अपार्टमेन्ट सूची, भाडाका लागि अपार्टमेन्ट सूची, अपार्टमेन्टहरूको लागि नि: शुल्क विज्ञापन, नि: शुल्क विज्ञापन अपार्टमेन्टहरू, अपार्टमेन्टहरूको लागि नि: शुल्क विज्ञापन, नि: शुल्क अपार्टमेन्ट विज्ञापन, नि: शुल्क अपार्टमेन्ट विज्ञापन वेबसाइटहरू, नि: शुल्क अपार्टमेन्ट सूची, नि: शुल्क अपार्टमेन्ट सूची, नि: शुल्क घर जग्गा सूची, अन्तर्राष्ट्रिय घर जग्गा सूची, अन्तर्राष्ट्रिय घर जग्गा लिस्टिंग नि: शुल्क, लिस्टिंग अपार्टमेन्ट, घर जग्गा सूची, अनलाइन घर जग्गा सूची, घर जग्गा सूची, सम्पत्ति सूची, घर जग्गा एजेन्सी सूची, घर जग्गा एजेन्ट सूची, घर जग्गा कम्पनी सूचीबद्ध, घर जग्गा सूची, भाडाको लागि घर जग्गा सूची, घर जग्गा बिक्री को लागी, घर जग्गा सूचि नि: शुल्क, घर जग्गा सूची अनलाइन, घर जग्गा सूची वेबसाइट, वास्तविकता सूची, जहाँ अपार्टमेन्ट विज्ञापन गर्ने, कहाँ नि: शुल्क घर जग्गा लिस्टिंग पोष्ट गर्ने। बुकमार्क को Permalink.
नोभेम्बर 29, 2018 एक रिमोट रियल इस्टेट मार्केटिंग र डिजाईनको साथ प्रभावकारी ढ Work्गले कार्य गर्न सुझावहरू जब यो एक सम्पत्ति बेच्ने कुरा आउँछ, रियल्टीडब्ल्यूडब्लु.इन्फो मा हामी जान्छौं कसरी महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग र डिजाइन हुन सक्छ। र यदि तपाई ब्यापार कसरी हुन्छ भन्ने बारे सचेत हुनुहुन्छ भने, एउटा चीज निश्चितको लागि हो - तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ, तर तपाईले जहिले पनि आफ्नो घर जग्गा मार्केटिंग गर्न समय पाउनुभयो। चाहे तपाई इउजीन, ओरेगनमा अपार्टमेन्ट मार्केटिंग गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ भाडा मूल्यहरू स्थिर छन्; वा न्यू योर्क शहरको पश्चिम गाउँमा आरामदायी कन्डो, तपाईंले जहिले पनि यो काम गर्ने तरीका भेट्टाउनुभयो। कडा वा ढिलो काम गर्दै, पाउँदै […] पोस्ट रियल एस्टेट व्यवसाय